तपाईको फोन हरायो ? यसरी पत्ता लगाउनुस् लोकेसन, रोक्नुस् डाटा मिसयुज | Rock Star News Online
Home प्रविधि तपाईको फोन हरायो ? यसरी पत्ता लगाउनुस् लोकेसन, रोक्नुस् डाटा मिसयुज
तपाईको फोन हरायो ? यसरी पत्ता लगाउनुस् लोकेसन, रोक्नुस् डाटा मिसयुज
एजेन्सी । स्मार्टफोन हराउँदा सबैभन्दा ठूलो खतरा आफ्नो डाटा अरुले दुरुपयोग गरिदेला भन्ने हुन्छ । केही सेटिङ मिलाएर तपाईं आफ्नो हराएको वा चोरी भएको स्मार्ट फोनको लोकेसन ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ, र यसका सबै डाटा मेटाउन पनि सक्नुहुन्छ । एन्ड्रोइडमा एक बिल्ट इन ट्र्याकिङ फिचर हुन्छ । यसलाई प्रयोग गरेर तपाईं आफ्नो फोनको लोकेसन पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ । यसका लागि google.com/android/devicemanager मा जानुहोस् र आफ्नो गुगल एकाउन्ट लगइन गर्नुहाेस् ।
तपाईं जुन गुगल एकाउन्ट लगइन गर्नुहुन्छ, त्यो एकाउन्टसँग जोडिएका सबै एन्ड्रोइड डिभाइसको लोकेसन गुगल म्यापको सहायताले यहीँबाट हेर्न सकिन्छ । यहाँबाट तपाईंले आफ्नो फोनमा घन्टी बजाउन पनि सक्नुहुन्छ । एउटा यस्तो अप्सन छ, जसबाट तपाईं आफ्नो फोनमा भएको सबै डाटा मेटाउन सक्नुहुन्छ । र, मोबाइल लक पनि गर्न सक्नुहुन्छ । यसको विकल्पमा तपाईं एबीजी, अवास्ट, क्यास्परस्काई, या लुकआउटको एन्टिभाइरस एप पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । यी एप्समा पनि रिमोट ट्र्याकिङ र डिभाइस लक तथा डाटा इरेजको सुविधा छ ।
आइफोनका लागि बिल्ट–इन एन्टीथेफ्ट एपको सुविधा छ, जुन सबै एप्पल आइओएस डिभाइसका लागि उपयोगी छ । यो एपको नाम फाइन्ड माई फोन हो । यसले तपाईंको आइक्लाउड एकाउन्टको माध्यमबाट काम गर्छ । icloud.com मा गएर तपाईं आफ्नो फोनको लोकेसन पत्ता लगाउन, फोनमा मेसेज पठाउन, फोन लक गर्न र डाटा इरेज गर्न सक्नुहुन्छ । यसका लागि तपाईंले आफ्नो मोबाइलको लोकेसन सर्भिस इनेबल गरेको हुनुपर्छ । यदि तपाईं यो फिचर प्रयोग गर्न चाहनुहुन्न भने थर्ड पार्टी एप पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
नेपाली वैज्ञानिकद्वारा बनाइएको भू-उपग्रह यसरी गरियो अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण, नेपालको एतिहासिक सफलता, विश्वको ध्यान नेपालतर्फ……(हेर्नुहोस् पुरा बिवरण)